DEG DEG: Dowladaha Maraykanka, UK & Norway:-Ma bixin doono wax lacag ah iyada aan doorashada toos loo guda galin. | Dayniile.com
Home Warkii DEG DEG: Dowladaha Maraykanka, UK & Norway:-Ma bixin doono wax lacag ah...
DEG DEG: Dowladaha Maraykanka, UK & Norway:-Ma bixin doono wax lacag ah iyada aan doorashada toos loo guda galin.
Dowladda Mareykanka, UK iyo Norway ayaa warsaxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen waxa ay ku caddeeyeen in aysan bixin doonin lacagta doorashada Soomaaliya iyada oo aan toos loo gudagalin doorashooyinka wadan
Qoraal ay wadajir u soo saareen oo ay arragtay Mustaqbal Media ayay ku sheegeen aysan bixin doonin lacagta loo qorsheeyay doorashooyinka inta saddex maamul gobol ay meel wanaagsan ka gaarsiinayaan doorashada Xildhibaaada Golaha Shacabka.
Sadaxdaan Dowladood ayaa sheegay in lacagta dheeriga ah oo ay Xafiiska Ra’iisul wasaaraha iyo midka gudiga doorashada codsadeeyn kaliya ay dhiibi doonaan marka ay arkaan qaabka doorashada ay u socoto iyo waliba in si fiican loo dhaqaajiyay codaynta golaha shacabka.
Dowladaha Mareykanka, UK iyo Norway ayaa Sidoo kale sheegay in Hadda ay Dowladda Soomaaliya iyo dowlad-goboleedyada dalka ay haystaan lacag ku filan oo ay doorashada kusii wadi karaan.
Previous articleMaamulka Galmudug oo Damacsan in Xeraale ay u aqoonsato Degmada 9aad ee Gobolka Galgaduud.
Next articleAmmaanka Dalka Kenya oo aad loo adkeeyay Ciidamadii keydka oo loo yeeray iyo Cabsi ka jirta Magaalada Nairobi
Gudoomiyaha Gudiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal( Maxamed Xasan (Ciro) oo ay wehliyaan Gudoomiyaha Gudiga hirgelinta Doorashooyinka Koonfur Galbeed Yuusuf Cabdulkadir Maxamed iyo Xubno ka...
Ciidamada gaarka u tababaran ee PSF & PMPF oo dhaqdhaqaaqyo iska...
Golaha Ammaanka ee QM oo waqti ugu daray howlgalka la dagaalanka...